Alemaina: Hetsika Fanoherana ny ACTA ao Berlin – Fanairana ny Mpanao Politika, Fampatsiahivina Ho An’ny Mpiserasera · Global Voices teny Malagasy
Alemaina: Hetsika Fanoherana ny ACTA ao Berlin – Fanairana ny Mpanao Politika, Fampatsiahivina Ho An'ny Mpiserasera
Voadika ny 15 Jona 2012 1:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, македонски, Français, Español, polski, 繁體中文, 简体中文, русский, English
“Aza adinoina ny manohitra ny ACTA” – tamin'izany teny vazivazy kely avy amin'ny mpikarakara ny hetsika fanoherana ny ACTA izany no namaranana ny hetsika notontosaina tamin'ny 9 Jiona 2012, tao Berlin. Nandritra ny Andro Eoropeana Hetsika ho Fanoherana ny ACTA, olona manodidina ny 500 teo no nidina manerana ny lalana ao Berlin mba hitsipaka ny fifanekena manohitra ny hosoka izay nahabe adihevitra satria inoana marimarina fa mety hametraka sazy vaovao hanerena ireo mpikirakira aterineto mba hanara-maso sy hanivana ny fifandraisana antserasera.
Hatramin'izao, firenena miisa 30 no nanao sonia nyACTA, saingy ny parlemanta Eoropeana ihany no manana ny teny farany raha ho tafiditra amin'ny lalàna manankery ny fifanekana na tsia. Fantatra fa hotontosaina mandritra ny fivorian'ny parlemanta voalohany amin'ny fiandohan'ny volana Jolay ny fifidianana izany fifanekena izany.
Nilaza izy ireo fa maty ny ACTA
Olona teo amin'ny 500 teo no nanohitra ny ACTA tao Berlin. Sary: Kasia Odrozek
Vao jerena, somary mahakivy kely ihany ny mahita ny havitsian'ireo mpanao fihetsiketsehana raha oharina tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana an'arivony maro nidina an-dalambe tamin'ny volana Febroary. Adinon'ny olona ve ny momba ny ACTA?
Tsy tokony hitady valiny lavitra ny tsirairay. Na dia eo aza ny fisian'ny Fifaninana Baolina Kitra Eoropeana izay mahavariana ny ankamaroan'ny olona, misy ny fanantenana lehibe fa efa maty ny ACTA ka efa lasa ny loza goavana. Tao amin'ny tranokalan'ny fikambanana Eoropeana misahana ny Zo nomerika, azon'ny tsirairay vakiana ity tamin'ny 9 Jiona:
Taorian'ny fanambarana momba ny tsy fisian'ny ACTA intsony, manontany ny antony mahatonga ny olona tsy miraharaha intsony ny hetsika fanoherana ny ACTA ny hafa androany. Tamin'ny volana Aprily, nilaza ny parlemanta Eoropeana misahana ny raharaha ACTA fa efa maty tsy misy intsony ny ACTA . Nilaza ihany koa ny Komisera Eoropeana misahana ny orinasam-pifandraisana Neelie Kroes tamin’ny volana mey fa efa tsy misy intsony ny ACTA. Ankehitriny; komity efatra samihafa ao amin’ny Parlemanta Eoropeana no nitsipaka ny ACTA tamin’ny volana Jiona. Ny tumbleweed ihany ve sisa no tokana handray anjara amin’ny fihetsiketsehana manohitra ny ACTA?
Nandritra ny andron’ny Eoropeana manohitra ny ACTA, nidina an-dalambe tao Berlin ny mpikatroka. Sary avy amin’i Kasia Odrozek
Ny fahitana ireo olona an’arivony manerana an’i Eoropa sy ireo an-jatony maro tao Alemana nidina an-dalambe mba hanaitra indray ny mpanao politika sy hampatsiahy ny orinasa no hita fa nahafa-po indrindra. Nanoratra tao amin’ny bilaoginy ilay mpitolona sady mpamahana bolongana Alemana, mspr0 tamin’ny 8 Jiona, anisan’ny tonga nanatrika ny hetsika izy:
Fantatro fa tsy misy intsony ary tena tsy misy intsony tokoa ankehitrio. Kanefa tsy izany mihitsy. Raha jerena lalina, mbola miezaka mamonjy izay tokony hovonjena ry zareo ka mila mandefa fanairana na hafatra mazava isika.
Nahoana no hevitra tsara ny ACTA?
Ankoatra an’i mspr0, nisy koa ireo mpikatroka maromaro naneho hevitra nandritra ny hetsika. Peter Sunde, mpiara-manorina ny Pirate Bay sy ny Flattr, nampahafantatra an’i Henrik Chulu avy amin’ny fikambanana danoà momba ny zo amin’ny aterineto Bitbureauet.
Amin’ity lahatsary eto ambany ity, izay nalefan’ny mpanoratra ny lahatsoratra tao amin’ny YouTube tamin’ny 10 Jiona, ahitanao an’i Henrik miresaka momba ny maha-zavadehibe ny tokony hitandremana, satria tsy ny ACTA ihany no volavolan-dalàna mety hatrehintsika. Nanipika ihany ko izy fa nisy nahatsara an’i Eoropa ilay fifanekena satria nampahatsiahy antsika ny maha-zavadehibe ny fahalalahana amin’ny aterineto ka mahatonga ny olona hirotsaka amin’ny sehatra politika ary hiaro ny zony hiditra sy hampiasa aterineto(zo nomerika).
Eto no ahafahanao mijery ny sary nalaina nandritra ny hetsika, narakitr’ilay Alemaina ONG Digitale Gesellschaft, mpanohana ny hetsika sy mpitarika ny hetsika fanoherana ny ACTA ao Alemana.
"Avelao hampiasa malalaka ny aterineto ny olona, raha tsy izany halainay ny fitaovana “fax” anareo" – mpikatroka tao amin’ny fihetsiketsehana tamin’ny 6 Jiona 2012. Sary: Kasia Odrozek
Tapitra ny andro Eoropeana Manohitra ny ACTA, saingy mbola ao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny parlementa Eoropeana ny fifidianana. Tsara ny mahafantatra fa manaraka akaiky ny ao amin’ny parlemanta ny mpiserasera, na dia mpikatroka an-jatony roa “fotsiny” aza izy ireo. Efa nahita tahaka izany isika, raha ilaina, vitan’izy ireo ny mandrisika mpiserasera hafa an-jatony na an’arivony.